Xoogaga Dowladda Islaamiga Ah oo Dilay Kenji Goto Muwaadin Japanes Ah Hanjabaadna Diray.
Saturday January 24, 2015 - 20:00:36 in Wararka by Super Admin
Dowladda Islaamiga ah ayaa ku dhawaaqday in ay dishay mid kamida laheystayaashii u dhashay wadanka Japan ee bilihii lasoo dhaafay gacanta ugu jiray.
Waxaa soo gaba gaboobay 72-kii saacadood ee dowladda islaamiga ah uqabatay dowladda Japan iyo shacabkeeda in ay ku bixiyaan 200 milyan oo dollar haddii ay sidaasi yeeli waayaana ladilayo maxaabiista laga heysto.
Muuqaal lagu baahiyay barta Internetka waxaa kasoo muuqanayay mid kamida muwaadiniinta Japanes-ka ah oo la gowracay iyo mid kale oo isagoo naxsan dowladdiisa ka codsanayay in naftiisa ay badbaadiyaan.
Dowladda Islaamiga ah IS aya ka laabatay dalabkeedi ahaa in lacago madax furasho ah lasiiyo waxayna ku bedeshay in lasii daayo gabadha muslimadda ah ee mudada sanadada ah ku xiran dalka Urdun ee Saajidah Al-riishaawi.
Xukuumada Japan ayaa durbadiiba sheegtay in ay dadaal dheeri ah ku bixin doonto soo badbaadinta muwaadinkeeda ku jira gacanta dowladda islaamiga ah oo maamusha dhul ballaaran oo Ciraaq iyo Suuriya katirsan.